Barsiisonni barattoota beekumsaafi naamusaan qaruuf qophii ta'uu ibsan
Qulqullina barnootaa eegsisuufi barattoota beekumsaafi naamusaan qaruuf qophii ta'uusaanii barsiisonniifi oggantoonni hojii Magaalaa Fiichee ibsan.
Barsiisonniifi oggantoonni hojii yaada Burqaa Oduu Itoophiyaatiif kennaniin, barattoonni naamusa qabaatanii beekumsa gahaa akka argataniif waan irraa eegamu hunda bahachuuf qophaa'aniiru.
Barsiistuun Mana Barumsaa Sadarkaa 2fa Fiichee Aadde Masarat Tufaa akka jedhanitti, bara barumsaa kanatti eegamuu qulqullina barnootaatiif waan danda'an mara gochuuf qophiidha.
Kana malees yeroo hojiisaanii sirnaan fayyadamuufi barattootasaaniif hordoffii gahaa gochuun barnootasaaniitti bu'aa qabeeyyii akka ta'aniif ittigaafatamummaa ogummaasaanii akka bahatan mirkaneessaniiru.
Dura taa'aan Mana Barumsaa Sadarkaa 2fa Abdiisaa Aagaa, Obbo Mulugeetaa Taaffasaa gamasaaniin akka jedhanitti, rakkoolee qulqullina barnootaarratti adda bahan hirmaannaa kallattii maatii barattootaafi barattootaatiin furuuf qophiin taaasifameera.
Mana barumsichaatti gumiiwwan lammummaafi naamusaa cimsuudhaan hariiroo barattoonni maatiisaaniifi hawaasa wajjin qaban fooyyessuudhaan lammii gaarii ta'anii akka bahaniif xiyyeeffannaan hojjetama jedhaniiru.
Barreessaan Waldaa Barsiisotaa Fiichee, Obbo Diras Ilfinah yaada kennaniin, hariiroon manneen barnootaafi maatii barattootaa jidduu jiru laafuufi barumsi lammummaa cimuu dhabuun kaka'umsi barattoonni barumsaaf qaban akka quucaru taasiseera.
Bara barnootaa eegalametti hanqina kana furuuf qaamolee dhimmamtootaa wajjin qindoominaan hojjechuuf kallattiin kaa'amuusaa ibsaniiru.
Magaalattiitti manneen barnootaa buleeyyiifi haaraan 17 Wiixata darbe hojii baruu barsiisuu eegalusaanii kan eeran ammoo Ittigaafatamtuu Ittaantuu Waajjira Barnootaa Magaalaa Fiichee, Aadde Baayyush Gammadaati.
Magaalattiitti barattoonni kuma 11fi 990n manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaafi lammaffaa galmaa'anii barumsa jalqabuusaaniis eeraniiru.
Akka ittigaafatamtittiin jedhanitti, waajjirrisaanii meeshaalee fooyya'iinsa qulqullina barnootaatiif gargaaran manneen barnootaatiif guutuuf tattaafachaa jira.
Bara barnootaa kanatti barattoonni raayyaa barnootaatiin gurmaa'anii barnootarratti akka cimaniif xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta'uunis ibsameera.
Torban kana/This_Week 11890
Torban darbe/This_Month 91727
Guyyaa mara/All_Days 1603685